NISSAN Calendar 2013 Kalenda - Imewe Mmewe
Kalenda Kwa afọ, Nissan na-emepụta kalenda n'okpuru isiokwu nke akara ngosi akara ya “Ọcụ ahịa na-adịghị ka ndị ọzọ”. Afọ 2013 juputara na mmeghe-anya na echiche pụrụ iche na okike ya dị ka nsonaazụ ya na onye na-ese ihe nkiri “SAORI KANDA”. Foto niile dị na kalenda bụ ọrụ SAORI KANDA onye na-ese ihe nkiri. O gosiputara mmuo ya nke ugbo ala Nissan nyere ya na eserese ya bu nke anatagotara na mkpuru ihu nke edobere na ebe nlere anya.
Aha oru ngo : NISSAN Calendar 2013, Aha ndị na-emepụta ya : E-graphics communications, Aha onye ahịa : NISSAN MOTOR CO.,LTD.